Isiqomile: IPSL igcine ikhethe kwaMultiChoice - Bayede News
by nguSihle Ndlovu
Isithombe: nguMuzi Ntombela
USihle Ndlovu ungumbhali wezemidlalo osesebenze njengentatheli iminyaka eli-17. Uke waba…
UKhongolose uthi i-Ithala aliyindawo
Yize imicabango yabantu igeleza ngezindlela eziningi, iqiniso elimile elokuthi yendela lapho ithanda khona
Ukumenyezelwa kweMultiChoice/DStv njengabaxhasi abasha bePremiership yaseNingizimu Afrika, kushiye abathandi bakanobhutshuzwayo bephikisana mayelana nokuthi kube yisinqumo esihle yini ukuthi iPremier Soccer League (PSL) ibe nesivumelwano nale nkampani.
Abanye babona lokhu njengesinqumo esingaphusile ngenxa yezizathu eziningi abazibalayo. IMultichoice iyona ephethe ilungelo lokusakaza unobubhutshuzwayo eNingizimu Afrika, ngakho abanye babona bekungafanele ukuthi iphinde ixhase iligi. Ngaphandle kwalokho le nkampani ingabaxhasi abakhulu beqembu elidlala kuPremiership, iSuperSport United. Konke lokhu abaningi babona kuzoba nokushayisana okukhulu njengoba iligi seyizokwaziwa ngeDStv Premiership.
Ngabe ikhona ngempela inkinga ekutheni iMultichoice ixhase iligi enkulu yakuleli? Cha, mina angiyiboni nencane inkinga kulokho. Empeleni ngokwami iMultichoice noma ingaba nelungelo lokusakaza yonke into, iphinde ixhase lapho ithanda khona, ayikho nencane inkinga lapho.
Abantu kumele baqonde into ehlale ishiwo uSihlalo wePSL, uDkt u-Irvin Khoza, ukuthi ibhola liyibhizinisi. Uma unebhizinisi awulokhu ubhala ucisha uma kukhona abafuna ukulixhasa. IPSL idinga imali ukuze ime njengenhlangano nanjengenkampani. IMultichoice uma inayo leyo mali edingwa yiPSL, kungani kungafanele ixhase?
Into okumele yaziwe abalandeli bebhola ukuthi kunzima ukuthola abaxhasi abasuke bezokwenza izinto ngendlela labo abaxhasiwe abafuna zenziwe ngayo. Ngiyezwa nje abaningi bethi uKhoza uyithanda kakhulu imali. Umbuzo omkhulu owokuthi, ngabe uKhoza bekumele ahlale asonge izandla noma i-Absa seyishilo ukuthi ngeke isaqhubeka nokuxhasa iPSL? Angithi yibona futhi abantu abebezogxeka ubuholi bukaKhoza ukube kuze kwasondela isikhathi sokuqala kwesizini entsha kungakacaci ngabaxhasi.
Ngiyazi kulula ukukhuluma singabalandeli sibeke imibono yethu mayelana nendlela izinto ezenzeka ngayo ebholeni lakuleli. Okunzima nokho ukuba sezicathulweni zabantu abafana noKhoza okumele bathathe izinqumo ezibalulekile mayelana nonobhutshuzwayo. IPSL ingenye yamaligi ahlonishwayo nje emhlabeni yingoba uKhoza nasebenzisana nabo bathathe izinqumo ezinkulu, ezifana naso lesi sokusayina isivumelwano neMultichoice. Okubalulekile ukuthi iligi izoqhubeka ngaphandle kwezihibe, amaqembu athole isibonelelo sanyanga zonke nabadlali bahole. Okunye nje mina angifuni ukuzihlupha ngakho.
Ekugcineni iMultichoice izoxhasa ibhola kuphela ngeke ikwazi ukulawula okuzobe kwenzeka enkundleni. Amaqembu asazodlala ibhola njengoba kade edlala, umehluko nje ukuthi esikhundleni se-Absa kuzobe sekukhona iDStv. Ngisabuza futhi, ikuphi inkinga lapho?
Sekuhlaluke kaningi ukuthi uma kukhulunywa ngonobhutshuzwayo waseNingizimu Afrika sonke sifuna ukuthi siyazi. Nokho nginesiqiniseko sokuthi uKhoza nethimba abambisene nalo lePSL, akavelanga wavuka ekuseni wafonela isikhulu seMultichoice, bavumelana khona lapho ocingweni ukuthi le nkampani iyona esizoxhasa iPremiership. Ngazi kahle ukuthi kube nezingxoxo ezijulile kwaze kwaba kufinyelelwa esivumelwaneni sokusebenzisana.
Maningi futhi amathuba okuthi iPSL ike yakhuluma nezinye izinkampani kodwa kwangavunyelwana. Ngakho kuwukuthatha mawala kithina ukuvele sithi iPSL bekungamele ibophe ifindo lomshado neMultichoice. Bekumele ilibophe nayiphi inkampani?
Amaphutha onompempe abonakala eyibomu akhalisa abaningi
Ngazi kahle ukuthi kukhona abebebheke ukuthi iBidvest kube iyona emenyezelwayo njengabaxhasi bePSL, ikakhulukazi ngemuva kokushabalala kweBidvest Wits. Nokho phela ayikho inkinga ekusheleni intombi kodwa uma ningavumelani ngezinto ezithile igcina ingakuqomanga.
Okumele sizifundise khona thina ukuyekelela abantu abazi ibhola benze izinto ngendlela abazi ngayo. Sonke sivunyelwe impela ukuphawula kodwa akumele sigxeke noma kungafanele. Kungani kuyisono sayo manje iMultichoice ukuthi inemali, ikwazi ukuthenga nokuxhasa noma kuphi lapho ifuna khona? Labo abashaya amakhala mayelana nokuxhasa kweMultichoice iPremiership, bashaya sengathi le nkampani izovele inqume ukuthi yiliphi iqembu elizowina isicoco seligi uma sekuphela isizini. Okusemqoka nje ukuthi iqembu elizodla umhlanganiso kuzomele lijuluke ensimini njengoba kwenze iMamelodi Sundowns ngesizini edlule, bese liphakamisa indebe lithole nemali.
Singabalandeli kumele sikufake kugxile emakhanda ethu ukuthi unobhutshuzwayo uyibhizinisi. Uma thina sicabanga ngendlela esifuna izinto zenzeke ngayo bese sikukhohlwa ukuthi ibhola yibhizinisi, kusho ukuthi asicabangisisi kahle.
Ngiyazi baningi abakholwa ukuthi izinqumo ezithathwa yiPSL zivuna amaqembu athile kunokuthi kuhlomule wonke ayibamba kuPSL. Nokho kulokhu ngibona uKhoza nethimba lakhe bethathe isinqumo sebhizinisi esikahle kakhulu. Ngeke kube kuhle ukuthi iPSL ize izithole ingenamali kodwa zikhona izinkampani ezifana neMultichoice ezizimisele ngokuxhasa ibhola laseNingizimu Afrika. Angifuni nokuyiphatha eyalabo abahluleka kudala ukuphakela abantu ibhola ngendlela eminyakeni eyinqwaba eyedlule. Ngiyaphinda futhi, noma iMultichoice ingaba nelungelo lokusakaza ngisho ingqathu namagende, mina ngeke ngibe nencane inkinga. Uma ngempela nginenkinga ngalokho ngingabe ngithi akwenziwe ubani? Ayidedelwe nje iMultichoice yenze ekuthandayo inqobo nje uma kuzothuthukisa kuphinde kwenze kungalalwa ngendlala emizini eminingi.
Mina engikulindele nje ukuthi kuqale isizini yowezi-2020/2021 yeDStv Premiership. Ukuthi ibhola lisakazwa futhi lixhaswe iyiphi inkampani, angizihluphi nakancane ngalokho.
nguSihle Ndlovu Oct 2, 2020